तिर्थको १ गोलसंगै रियल ब्रदर्श पथरीशनिश्चरे प्रिमियर लिगको फाइनलमा - Pradesh Dainik
तिर्थको १ गोलसंगै रियल ब्रदर्श पथरीशनिश्चरे प्रिमियर लिगको फाइनलमा
बिहिबार, चैत ०३, २०७८ , प्रदेश दैनिक
पथरी, तिर्थ बस्नेतले गरेको गोल निर्णयक बन्दा दि रियल ब्रदर्श इन्ट्रा पथरीशनिश्चरे फुटबल प्रिमियर लिगको फइनलमा प्रवेश गरेको छ । दोस्रो संस्करणमा सुरुवातदेखि नै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै आएको रियलले फाइनलको यात्रा तय गरेको हो ।
आज भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा द रियल ब्रदर्शले शिखर एफ.सी.माथि शुन्यको विरुद्ध १ गोल गर्दै न्यू स्टार एफ.सी. सँग फाइनल खेलको भेट पक्का गरेको हो ।
जितका लागि रियलका तिर्थराज बस्नेतले ३६ औं मिनेटमा गरेको एक मात्र गोल पर्याप्त बन्यो । शिखरको डिफेन्सहरु बिच एकआपसमा तालमेल नमिल्दा बस्नेतले गोल गर्न सफल भए ।
खेलको सुरुवातदेखि नै शिखरमाथि द रियलले दबदबा कायम गरेको थियो । द रियलका दुई सशक्त खेलाडीहरू सेनेहाङ लिम्बु र समिर याक्खा घाइते हुँदै खेल मैदान छाड्न बाध्य भएका थिए । यस्तैगरी दोस्रो हाफको अन्त्यतिर शिखरले दुई वटा निक्कै राम्रो अवसरहरु गुमाउन पुग्दा हार बेहोर्नुपरेको हो ।
खेलको म्यान अफ द म्याच विजयी टिम द रियलका गोलकर्ता तिर्थराज बस्नेत घोषित भए । प्रतियोगिताको फाइनल खेल न्यू स्टार एफ.सी. र द रियल ब्रदर्श बिच शनिबार हुने आयोजकका संयोजक संजिव गिरीले जानकारी दिए । बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा टेन नवोदयलाई पराजित गर्दै न्यू स्टार एफ.सी. फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ ।
यसअघि फागुन २२ गते द रियल ब्रदर्श र न्यू स्टार एफ.सी. आमने सामने भइसकेका छन् । सो खेलमा द रियल ब्रदर्शले शुन्यको विरुद्ध ३ गोल गर्दै न्यू स्टारमाथि सानदार जित निकालेको थियो ।